မျိုးကျော့မြိုင် စိတ်ဖောက်ပြန်ပြီး ကလေးတစ်ယောက်ကို ထိုးပြန် ~ Myanmar Express
မျိုးကျော့မြိုင် စိတ်ဖောက်ပြန်ပြီး ကလေးတစ်ယောက်ကို ထိုးပြန်
From : Lu Ciferအဆိုတော်မျိုးကျော့မြိုင်က အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးတဦးကို ငွေကြေးခိုးယူမှုနဲ့ စွပ်စွဲပြီး ထိုးကြိတ်ခဲ့တဲ့ သတင်းနဲ့ အဲဒီလို နှိပ်စက်ခံထားရတဲ့ ကလေးရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို အင်တာနက်အီးမေးတွေ ကနေ တဆင့် လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ မောင်ဟိန်းမင်းသူနှိပ်စက်ခံရတဲ့ ကလေးအမည်က မောင်ဟိန်းမင်းသူ ဖြစ်ပြီး ဆေးရုံမှာ ကုသမှုခံခဲ့ရပြီးတာနဲ့ ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ မောင်ဟိန်းမင်းသူ နဲ့ အဆိုတော် မျိုးကျော့မြိုင်တို့ကို RFA အဖွဲ့သားတွေက ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ကိုနေရိန်ကျော်ရဲ့ တင်ပြချက်ကို နားဆင်ပါ။http://www.rfa.org/burmese/news/child-abuse-05262012131106.html/b0526nrk7.mp3အရင်တုန်းကလည်း မျိုးကျော့မြိုင် ဟာ မင်းသမီး ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် နဲ့ ကာမ အကြောင်း ပြောထားတဲ့ အသံဖိုင်တွေ ထွက်ခဲ့ဖူးသလို မင်းသား ပြေတီဦးရဲ့ ဒီဇိုင်နာ အမျိုးသမီးနဲ့ ကာမ ဆက်ဆံနေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်း ထွက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။အခုတော့ မျိုးကျော့မြိုင်ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ဝင်ထွက် သွားလာနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။Myanmar Express
28 May 2012 05:24
He must fucking this old bitch, Saut Su. No wonder they all are like his mother..Mother like son! hahaha
28 May 2012 07:51
Who is whom to target each?
အဲံ သူတောင်းစား အကြောင်းက မေးစရာ မလိုပါဘူး သိပီးသား...